Indlu embindini wehlathi Ilungele iintsapho
Indlu entle embindini wehlathi, ikhanyiswe kakuhle, eneendawo ezininzi zokuzonwabisa zentsapho kunye nokunxibelelana nendalo; igrill yokutshisa iinkuni, enetafile kunye negumbi lokuhlambela langaphandle. Wamkelekile kubo bonke abathandi bendalo.
Iiyure ezi-2 ukusuka kwisiXeko saseMexico kunye neekhilomitha ezi-2 ukusuka kwidolophu yaseAcaxochitlán, uya kufumana le ndawo emangalisayo, yabucala, ebanzi, ejikelezwe ngamapine kunye ne-oki; ioksijini kunye nokuzola kuya kukwamkela.
Njengoko indlu yakhiwe ngophahla lwegabled, amagumbi akumgangatho wesithathu anomtsalane, njengoko umbono ovela apha uyamangalisa kwaye angawona magumbi ashushu ehlotyeni nasebusika.
Ukubenza bazive bekhululekile, siya kubabonelela ngokubonelela ngeenkuni kwindawo yomlilo kunye ne-barbecue.
Ukongezelela koko indlu nokunikela zayo ngaphandle kwakho, ungenza Iihambo kufuphi Chimalapa Waterfalls, ukuba "Las sobredas Piedra", tyelela i Tejocotal ichibi, ama-apile Zacatlán de las, okanye ndwendwela nje dolophu, esinikeza wena ezinye elotes sahlulwa kunye nesonka se-oveni, ukukhotha iminwe yakho, kunye nemarike yasemaphandleni yangeCawa enezithako ezivela kummandla, ezitsha kwaye ziyamangalisa, ezifana neentlobo ezininzi zamakhowa.
Ukukukhonza sinabahlobo bethu abathandekayo uPablo noVero. UPablo ngumgcini wepropati. Uya kukukhokelela endlwini, akunike izitshixo zendlu kwaye ungambiza ukuba aphendule nayiphi na imibuzo.